मृत्युअघि मानिसलाई यमराजले देखाउने ४ संकेत ! – Krazy NepaL
May 20, 2021 2083
सृष्टिको नियममा मानिस मात्र होइन स्वयम् भगवान पनि बाँधिएका छन् ।
भगवानले पनि सृष्टिका केही नियमलाई पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जबजब भगवानले मनुष्य अवतार धारण गरे उनीहरुले पनि शरीर त्याग गर्नुपर्याे । तसर्थ मानिसले पनि आफ्नो शरीर निश्चित अवधिपछि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार मानिसको अनुरोधमा यमराजले मृत्यु अघि ४ संकेत दिने वचन गरेका थिए । जसको पालन यमराज गर्दछन् । जसअनुसार कोहि मानिसलाई मृत्यु आउनु अघि शरीर त्याग गर्ने समय आएको यमराजले संकेत दिने गर्दछन् ।
धार्मिकशास्त्र अनुसार मानिसको आयु पूरा भएको र शरीर त्याग गर्ने समय आएको संकेत यमराजले यस प्रकारले दिने गरेका छन्-
अधिकांश मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा कपाल सेता हुन थाल्दछ । मानिसको आयु सकिएको संकेत गर्ने यमराजको पहिलो संकेत भनेको मानिसको उमेर बढेसंगै उसको कपाल सेता हुदैं जानु हो । यसले मानिसलाई उमेर संगै आयु सकिन लागेको संकेत गर्दछ ।
यमराजको दोश्रो संकेत भनेको उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको दाँत समेत झर्न थाल्दछन् । यसले मानिसलाई आयु सकिँदै गएको संकेत गर्दछ । दाँत झरेसंगै मानिसको शरीरले मुक्तिको मार्ग खोज्न थालेको संकेत गर्दछ ।
मानिसको आयु सकिएको तेश्रो संकेत भनेको मानिसको ज्ञानेन्द्रीय कमजोर हुदैँ जानु हो । शरीर बुढो भएपछि मानिसको हेर्ने, सुन्ने लगायतका क्षमता कम हुँदै जान्छन् । यस समय यमराजको संकेत रहन्छ अब सृष्टिको कुरा भन्दा पनि आत्म चिन्तन र मननमा ध्यान केन्द्रित गर ।
Prevआज बिहान ९ बजेर १७ मिनेटबाट शुक्रले मच्चाउँदै छ हङ्गामा, ४ राशिलाई राज योग !
Nextसर्वोच्च अदालतद्वारा गैरसांसद सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर
सर्वोच्च अदालतद्वारा गैरसांसद सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर